Isiokwu nke Guatemala Land Survey Congress - Geofumadas
Nọvemba, 2011 cadastre, Akụziri CAD / GIS, Land Management
Naanị mechara Nchịkọta Ụlọ Nzukọ Alaeze na Nyocha emere na Guatemala ọnwa gara aga, ezigala ihe ngosi ndị ngosi ahụ. Ha dị na otu ibe, ọ bụ ezie na ọ bara uru ịhụ ha na Slideshare, site na ebe enwere ike ibudata ha.
M na-atụ aro ibudata ha ma chekwaa ha na faịlụ nkeonwe, na-eche na n'oge ndị a ọ dịghị onye na-ekwe nkwa ihe dị na weebụ. Ọ bụkwa nnukwu ihe eji arụ ọrụ mgbe a na-enye ọzụzụ na mpaghara eserese.
Kwadebezie ndị dịnụ, na usoro ziri ezi maka isiokwu.
Mbido na Ebumnuche nke Development Territory
Enweghi ike maka mmepe mpaghara n'umu ime obodo.
Ahụmahụ ndị òtù ndị nkịtị na-ebute.
Nsogbu obodo na ime obodo nke Guatemala nke XXI Century
na akụrụngwa maka ịhazi na ịhazi mpaghara
Violeta Reyna, Director nke Land Management SEGEPLAN
E mgbanwe nke nchịkwa ala na Guatemala
Ihe nlere anya nke ihe ha na-eme na Guatemala; otu onye nọ n'ebe ahụ site na mmalite na-agwa onye ọhụụ a.
Ọtụtụ nsogbu kwa ...
The cadastre dị ka ngwá ọrụ maka mmepe mpaghara
Diego Erba, Lincoln Institute for Administration Land
Ọ dị mma, na-egosi otú Cadastre si arụ ọrụ, ọ bara uru na njikọ ọ na-enye mgbe niile iji kwalite ọrụ Lincoln Institute ma ọ bụ mbipụta.
C Kesaa iji merie: ọrụ nke ozi maka nchịkwa mpaghara
Diego bụ ọkachamara na nke a, ọ na-amasị m ụdị ngosi ya, na-enwe mmetụta dị ike. Ọ bụ ezie na ọ bụghị na ị nọghị na mmemme ahụ ... ị fọrọ nke nta ka ihe niile funahụ gị.
Njikwa ala na Netherlands
Ihe ngosi a na-egosi otu Cadastre si aru oru na Netherlands. Ọnọdụ dị iche na nke anyị, mana usoro dịka CNR na El Salvador.
Mmepe na ụwa nke nchịkwa ala: ụdị mpaghara na nchịkwa ala, cadastres na 3D na ndekọ aha
Anwụrụ ọkụ na-adọrọ mmasị, na ọnọdụ nke isiokwu 3D na Cadastre. O nwute, na n'ọnọdụ anyị ọ bụghị ihe kacha mkpa mgbe 2D ka bụ ihe ịma aka, agbanyeghị ọ bara uru ịmara ya n'ihi na ọ bụ ebe mba ndị mepere emepe na-aga. Ọ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị maka obodo ukwu, dị ka Mexico City, Bogotá, iji tinye ihe atụ nke gburugburu anyị ebe ọ nwere ike ịdị ngwa ngwa.
Iji ozi nke cadastral dika ihe ndabere maka atumatu eji ala eme ihe
Eddy Diaz, Ndenye nke Ozi Cadastral
Obodo Cadastres - Ohere ma ọ bụ isi ọwụwa maka obodo anyị?
Lincoln Institute for Administration Land
Mmasị, ihe atụ bara uru nke ịkọwapụta map nke ụkpụrụ omume cadastral; ihe ịma aka imelite gị.
Ịmebata teknụzụ ọhụrụ na ọrụ mmemme nke mpaghara ahụ
Nke a bụ ihe ngosi anyị, na ihe ndị na-eme na Central American na-ekwu maka iji teknụzụ maka nlekọta mpaghara.
Ịgba ụja na ozi ala
Nke a bụ n'asụsụ Bekee, ihe ngosi na-atọ ụtọ maka nrụpụta data sitere na mmekorita obodo. Mostkpụrụ kachasị na-adigide nke a bụ Open Map Street.
Ọ bụ ezie na isiokwu ahụ dị ka astral, nke ọma Javier maara nke ọma otu a n'ihi na ọ na-abịakarị ịkụzi ihe ọmụmụ ma ọ bụ nzukọ. Ezigbo mma echiche na njedebe, nke m dechara na okwu nke laghachi n'isi obodo.
Jiri ya na ikike nke Geoservices maka IDE
Ma nke a ma ihe ngosi na-esonụ dị mma ịmara ọrụ na ọnọdụ ndị ụkpụrụ OGC nwere.
IKPE: nzọụkwụ mbụ maka SDI na Guatemala?
Omuma bu ihe ngosi a, nke gosiputara otu esi etinye oru geoservices na Guatemala. Nnabata nke gvSIG nwetere dị ka onye ahịa IDE, tinyekwa nkwụnye MapBender, bụ ihe na-atọ ụtọ; mgbe ahụ GeoServer / Apache maka ijikwa WFS na MapServer maka WMS / WCS.
Akwa utom SEGEPLAN na Mahadum San Carlos, na idebe okwu a dị ndụ na mpaghara ahụ.
Lee ihe ngosi na Congress peeji nke
Lee ihe ngosi na Slideshare
Previous Post«Previous Bentley M-nlereanya, mmekọrịta site na ODBC
Next Post Mepụta mmezi na CivilCADNext »